Endrik'io pejy io tamin'ny 30 Aprily 2019 à 04:44
130 octets ajoutés , il y a 3 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 20 Febroary 2019 à 05:50 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 30 Aprily 2019 à 04:44 (hanova) (esory)
=== Filazam-potoan'ny ova-matoanteny ===
Ao amin'ny [[Fitsipi-pitenenana|fitsipiteny]] mahazatra dia anarany fotsiny ny filazana ny endriky ny ova-matoanteny ho manana filazam-potoana. Amin'ny ankapobeny, na ny "ova-matoanteny ankehitriny" na ny "ova-matoanteny lasa" dia tsy milaza fotoana fa milaza [[Fanehoan-javatra (fitsipiteny)|fanehoan-javatra]]: ny ankehitriny ho an'ny [[Fanehoan-javatra efa sy tsy efa|fanehoan-javatra tsy efa]] fa ny lasa ho an'ny [[Fanehoan-javatra efa sy tsy efa|fanehoan-javatra efa]].
Ny ova-matoanteny ankehitriny ao amin'ny [[Fiteny frantsay|fiteny frantsay]] dia miafara amin'ny -''ant'' (ohatra: ''marchant'', ''parlant'', ''mangeant, perdant, finissant'') fa ny ova-matoanteny lasa kosa dia manana endrika isankarazany arakaraka ny matoanteny (ohatra: ''marché'', ''parlé'', ''mangé, perdu, fini'').
Ny ova-matoanteny ankehitriny ao amin'ny [[Fiteny anglisy|fiteny anglisy]] dia miafara amin'ny -''ing'' (ohatra: ''walking'', ''speaking'', ''eating'') fa ny ova-matoanteny lasa kosa dia manana endrika isankarazany arakaraka ny matoanteny (ohatra: ''walked'', ''spoken'', ''eaten'').
Amin'ny fiteny sasany toy ny [[fiteny latina]] dia misy koa ny ova-matoanteny hoavy, ankoatry ny ova-matoanteny ankehitriny sy ny ova-matoanteny lasa ka azo raisina ohatra ny hoe ''morituri'' ("ireo izay ho faty") izay ova-matoanteny hoavin'ny hoe ''morire'' ("maty").
=== Ova-matoanteny enti-mamorona endri-pilazam-potoana ===
Ao amin'ny fiteny anglisy dia ampiasaina miaraka amin'ny [[Matoanteny mpanampy|matoanteny mpanampy]] ''have'' ny ova-matoanteny lasa (-''ed'' sns) mba hahazoana ireo filazam-potoana amin'ny fanehoan-javatra efa toy ny filazam-potoana ankehitriny efa (anglisy: ''present perfect'') sy ny filazam-potoana lasa efa (anglisy: ''pluperfect'' na ''past perfect'') sns.
Ao amin'ny fiteny anglisy ihany dia ampiasaina miaraka amin'ny [[Matoanteny mpanampy|matoanteny mpanampy]] ''be'' ny ova-matoanteny ankehitriny (-''ing'') mba hahazoana ireo filazam-potoana amin'ny [[Fanehoan-javatra mitohy sy tsy mitohy|fanehoan-javatra mitohy]] toy ny filazam-potoana ankehitriny mitohy (anglisy: ''present continuous'') sy ny filazam-potoana lasa efamitohy (anglisy: ''past continuous'') sns.
== Ova-matoanteny sy fiendrika ==
Amin'ny [[fiteny frantsay]], ho an'ireo [[matoanteny mihatra]] dia amin'ny [[Fiendrika mañano|fiendrika manano]] ny ova-matoanteny ankehitriny (ohatra: ''La fille chant'''ant'''e'') fa amin'ny [[Fiendrika anoina|fiendrika anoina]] kosa ny ova-matoanteny lasa (ohatra: ''Les chansons chant'''é'''es''). Torak'izany koa ny miseho amin'ny [[fiteny anglisy]], ho an'ireo matoanteny mihatra dia amin'ny [[Fiendrika mañano|fiendrika manano]] ny ova-matoanteny ankehitriny fa amin'ny [[Fiendrika anoina|fiendrika anoina]] kosa ny ova-matoanteny lasa.
=== Ova-matoanteny ampiasaina hahazoana fiendrika ===
== Ova-matoanteny ao amin'ny fiteny rosiana ==
Ao amin'ny fiteny rosiana dia miavaka tsara ny [[Filazam-potoana (fitsipiteny)|filazam-potoana]] sy ny [[fiendrika]] raha ny ova-matoanteny no resahina, ka misy ny '''ova-matoanteny ankehitriny manano''' sy ny '''ova-matoanteny ankehitriny anoina''' sy ny '''ova-matoanteny lasa manano''' ary ny '''ova-matoanteny lasa anoina'''. Ankoatr'izany dia mifandrindra amin'ny [[Filaza isa (fitsipiteny)|filaza isa]] sy ny [[kilahivavy]] ny ova-matoanteny rosiana.
Ohatra: matoanteny ''чита́ть'' ("mamaky")
* ''прочитанный'' ("novakina") (tsy maintsy [[Fanehoan-javatra mifetra sy tsy mifetra|matoanteny mifetra]]).
* ''Де́вушка, <u>чита́ющая</u> тут кни́гу, – моя́ сестра́'' ("Ilay zazavavy <u>mamaky</u> an'ity boky ity dia anabaviko") (Ova-matoanteny ankehitriny manano).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/970509"